စစ်ကိုင်းမြို့က ပြည်သူတွေကို နှိပ်စက်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ | Saffron People's Movement
စစ်ကိုင်းမြို့က ပြည်သူတွေကို နှိပ်စက်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ
February 3, 2011 in သူတို့အတွေးသူတို့အမြင်
စစ်ကိုင်းမြို့ပါရမီရပ်ကွက် မြိုနယ်အခွန်ဦးစီးရုံးမှ ဝန်ထမ်းများမှာ ပြည်သူများကို လည်ပင်း မညှစ်ရုံတစ်မယ် ဒါးပြတိုက်သလို ငွေများစွာအား အတင်းအကျပ် တောင်းမြဲတောင်းနေကြခြင်းအား စုံစမ်းအရေးယူပေးပါရန် ….။
ငွေအမြဲတမ်း မဟားဒယား အကြောင်းမျိုးစုံပြတောင်းနေသော ဝန်ထမ်း ၂ ယောက်၏အမည်မှာ
ကျွန်တော်မှာ မိဘ ၂ ပါးရယ် အကို ၁ယောက်ရယ် ညီမလေး၁ ယောက်ရယ်ရှိပါတယ်…။
ယ္ခုဖြစ်ရပ်မှာ ပုံစံ( ၁၇ ) လုပ်ခဲ့သောကျွန်တော်၏ ကိုယ်တွေ့အမှန်တစ်ကယ်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည် …ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံးဝမပါဝင်ကြောင်း ဘုရားရှင်အား တိုင်တည် သစ္စာထား၍ ကျိန်တွယ် ပြောပြ လိုက်ရပါတယ်…။
ကျွန်တော်၏ အမည်ရင်း မဖော်ပြခြင်းအားသည်းခံပေးပါရန်..အကြောင်းမှာမူ အမည်ရင်း ပြောပြလိုက်ခြင်း အားဖြင့် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် နှင့် နယ်ခံဖြစ်သောကျွန်တော်၏မိဘများမှာနောက်လာမယ့် ကိစ္စများတွင် ဒုက္ခရောက်မည် စိုးသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်…….။
ဖြစ်စဉ်…။ ။ ကျွန်တော်၏ မိဘများမှာ စားသောက်ဆိုင်လေး ဖွင့်ထားကြပါတယ်…ကျွန်တော်မှာမူ ၁၀ တန်းအောင်၍ ရန်ကုန်မြို့ကြီးသို့ တက်ရောက်၍ မိဘများကို အလုပ်အကြွေးပြုချင်သောကြောင့် ကိုယ်ဒူးကိုချွန်ကာ သင်တန်းတွေ ကြိုးစားတက်ပြီး အလုပ်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်လာကာ ယ္ခု နောက်ဆုံးတွင် ဒေါ်လာစား လခရသော ရေနံ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် လခစားဝန်ထမ်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျား…။
ကျွန်တော်၏ မိဘအပေါ်သိတက်မှု့နှင့် ကြိုးစားမှု့ကြောင့် ကုမ္ပဏီမှ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ စေလွှတ်မှု့အခွင့်လမ်း တစ်ခ ပေါ်ပေါက်လာ ခဲ့ရပါတယ်…။
အဲဒီမှာ စတွေ့တာပါပဲခင်ဗျာ….သန်းခေါင်စာရင်းက စစ်ကိုင်းဇာတိ ဆိုတော့ ပုံစံ( ၁၇ ) က စစ်ကိုင်းကို ပြန်လုပ်ရတော့တာပါပဲ….။
ကုမ္ပဏီမှ ကျွန်တော်ရဲ့ စီနီယာ အကို အမများလည်း ရှေ့ကနဦးကတည်းက နိုင်ငံရပ်ခြား သွားနေကြတာတွေ လုပ်သက် ၂ နှစ်အတွင်းကျွန်တော်မြင်တွေ့ ကြားသိနေရပါတယ်…ဒီလို ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးမှာတောင်.. ပုံစံ( ၁ရ ) လုပ်ကြတဲ့အခါတိုင်းမှာ ရုံးက လစာထုတ်တိုင်း MFTV BANK မှ လစဉ် ၀င်ငွေအခွန်ထမ်းဆောင်ပြီးကြောင်း ထောက်ခံစာတွေနဲ့အတူ သွားခဲ့ကြတာ ယ္ခုချိန်ထိ ကျသင့်ငွေ ကျပ်ငွေ ငါးထောင် ( ၅၀၀၀ ) ပဲတောင်းခံပါသတဲ့..ပေးနေကြရပါသတဲ့။ ဒါလောက်ကတော့ဖြစ်သင့်ပါတယ် ပေးလို့ ကြည်ဖြူ လျှောလျှောလျှူလျှူ ပေးနိုင်ပါတယ်..။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အဲဒါလုပ်ဖို့ အတွက်ကုမ္ပဏီကနေ လစဉ် ၁၀ % ရာခိုင်နှုန်း အစိုးရအား ပေးဆာင်ထားကြောင်းနဲ့ MFTV BANK မှ အခွန်ထမ်းဆောင် ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံစာတွေ ယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ ။
ဇာတ်လမ်းက အဲဒီ အခွန်ရုံးကိုရောက်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် အေးအေးဆေးဆေး ချိုချိုသာသာပဲ ပုံစံ ၁၇ လုပ်ချင်လို့ပါ ။ ဘာတွေလိုအပ်ပါသေးလည်း အရင်မေးပါတယ်…ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာနဲ့ ရဲစခန်း ထောက်ခံစာ လိုပါတယ်ဆိုလို့ ကျွန်တော်မှာ တောင်နဲ့မြောက် တကယ်ကို အပြေးလွှား သွားခဲ့ရပါတယ်…။
ရဲစခန်းက ရဲအရာရှိတွေနဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေက တကယ်သဘောကောင်းကြပါတယ်…ကိုယ်လိုတာရလို့ သဘောကောင်းတယ်လို့ ပြောတာ မထင်စေချင်ပါဘူး…ပုံစံထဲ ဘောင်ထဲကနေ သဘောကောင်းချင်းကို ဆိုလိုတာပါခင်ဗျာ..။ ထောက်ခံစာလုပ်ပြီးလို့ အကို ကျွန်တော် ဘာများလုပ်ပေးရမလည်း မေးတော့.. ရပါတယ် စာရွက်ဖိုးသာ ပေးပါတဲ့ ၅၀၀ ပဲတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ..။ ကျွန်တော် ဖလားထဲကို ၁၀၀၀ တန်ထည့်ပေးခဲ့ပါတယ်.။
အားလုံး စုံလို့ အခွန်ရုံးပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်…။ ဒုဦးစီးမှုး အဲဒီဒေါ်ခိုင်ခိုင်လတ်ကို တွေ့ရဖို့ အရေး စာရေးမ အေးငြိမ်းအိ ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်ထက်ငယ်မယ့်ပုံရတယ် သူကိုတွေ့ရတာနဲ့တင် စိတ်ညစ် မိတာများဗျာ….မျက်နာက တလောကလုံး သူ့လုပ်စာ စားနေတဲ့ရုပ်နဲ့ မျက်နာကို ချီနေတာပဲ..။
သူတင်မကပါဘူး သူ့အရာရှိ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်လတ် ပိုဆိုးသဗျာ ..။ အဲဒီ အမျိုးသမီးဗျာ မျက်နာထားက တော်တော်တင်းထန် ပါတယ်…သူ့ဆီက ပိုက်ဆံ လာတောင်းတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ကို ဟောက်လိုက် ဆိုလိုက် ပြောလိုက်နဲ့ဗျာ…။
ပုံစံ (၁၇) လုပ်ချင်လို့ဆိုတော့ ၁ ယောက်ကို ၄သောင်းပေးရပါမယ်တဲ့ဗျာ…ဘယ်နှယ့် ရန်ကုန်မှာတောင် ဘယ်ချိန်လုပ်လုပ် ငါးထောင်ပဲ ……ကျွန်တော်လည်းမခံပါဘူး ရန်ကုန်မှာတောင် ဒါလောက်ပဲကျတာ ဒီမှာ ကျွန်တော် အဲဒီလောက်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့…နောက်ပြီး ကျွန်တော့်မှာ ကုမ္ပဏီကနေ လစဉ် ၁၀ % ရာခိုင်နှုန်း အစိုးရအား ပေးဆာင်ထားကြောင်းနဲ့ MFTV BANK မှ အခွန်ထမ်းဆောင် ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံစာ ပါလာပါတယ်ဆိုပြီး ပြလိုက်ပါတယ်…။
အဲဒါဆို သန်းခေါင်စာရင်းလေး ပြပါဆိုလို့ ကျွန်တော် ပါလာတဲ့ စာရွက်စာတမ်း အစုံလိုက်ကို သူ့ကိုပေးလိုက်ပါတယ်…။ စာရွက် ကြည့်ပြီး သြ….ဦး— ရဲ့သားကိုးတဲ့…. …။ စတင်ပြီး အပြစ်ရှာ ပါတော့တယ်…။ မင်းအဖေက စားသောက်ဆိုင် ပိုင်ဆိုင်တာကို အခွန်ဘယ်တော့မှ မဆောင်ဘူး ပတ်ပြေးနေတာတဲ့…..ကျွန်တော် တော်တော် အံ့သြ သွားတာပါ..တကယ်လည်း အဲဒါကိုမသိပါဘူး….။
မင်းအဖေက တကယ့် အခွန်ဆောင်ရင် သိန်းကို ဆယ်နဲ့ချီပြီးဆောင်ရမယ့်ဟာကို ငါတို့က စည်းကျပ်ခွန် အနေနဲ့ နားလည်မှု့နဲ့ ၁ နှစ်ကို ၁၂၀၀၀၀ ( တစ်သိန်း နှစ်သောင်း ) ကို ၆လ ၁ခါ ၆သောင်းစီပဲခွဲ ဆောင်ခိုင်းတာကို မဆောင်ဘူး အခွန်မဆောင်ပဲ ရှောင်ပြေးနေတာတဲ့…။ အဲဒါအခွန် ၆ သောင်းဆောင်မယ် ဆိုမှ ပုံစံ (၁၇ ) လုပ်ပေးမတဲ့ဗျာ…အကြီးဆုံးဦးစီးမှုးကိုလည်း မင်းပြောတဲ့ ၅၀၀၀ နဲ့ရအောင် ပြောပေးမတဲ့ဗျာ…။
ကျွန်တော်က အဲဒါက အဖေပိုင်တာပဲ ကျွန်တော်နဲ့မှ မဆိုင်တာ နိုင်ငံခြားသွားတာ အဖေမှ မဟုတ်တာ…ကျွန်တော်ကလည်း အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်း အကုန်ပါနေပီပဲ ဘာမှမဆိုင်တာ မဟုတ်ဘူးလား မေးတော့ .. အဲဒါက ဝင်ငွေခွန် အဲဒါက လုပ်ငန်းဝင်ခွန်နဲ့ ရှုတ်ရှက်ခတ်နေအောင် ဘာတွေပြောမှန်း မသိပါဘူးဗျာ…ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်လည်း စိတ်လျှော့ပြီး အဖေကိုအခွန်ဆောင်ဖို့တွက် ဖုန်းနဲ့လှမ်းမေးတော့…
အဖေ………….ဟင် မင်းအကိုကြီး သွားဆောင်ပေးထားတာ ၂လပဲရှိသေးတယ်တဲ့…
ကျွန်တော်….ဟာ ဒါဆို အကိုကြီးကိုမေးဦးမှပဲ…။ ကိုကြီးရေ ဒီလို ဒီလို အကျိုးအကြောင်း ပြောပြလိုက်တော့…။
အကိုကြီး……..တောက် xxxxx ကောင်မတွေ ငါဆောင်ပြီးသားကို ပတ်ပြေးနေတယ်ပြောတယ် ဟုတ်လား အေး..ငါခုပဲလာခဲ့မယ် ..အဲဒီမှာစောင့်နေ…။
အကိုကြီးစာရွက်စာတမ်းတွေကိုင်ပြီး ဒေါသတွေနဲ့ ရောက်လာပါတယ်…အဲဒီ ခိုင်ခိုင်လတ် အခန်းထဲ ဝင်သွားပါတယ်…အကိုက စာရွက်တွေပြပြီး ဆောင်ထားတာ ၂လပဲရှိသေးတယ် ခင်ဗျားတို့ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုတွေပြောတာလည်း ဆိုတော့…. ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်နဲ့ စကားလမ်းကြောင်းတွေလွှဲပြီး အဲဒီ ဆောင်ထားတဲ့ အခွန်ကိုတောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး.. ကြိုတင်ခွန်ဆောင်ဖို့ တောင်းတာပါ ဆိုပြီး လေသံတွေ လျှော့သွားပါတယ်..(စောနက လေသံထက် အနည်းငယ်ပေါ့) ။
ကြိုတင်ခွန်က ဘာလို့ဆောင်ရတာတာလည်းမေးတော့ …စားသောက်ဆိုင်တိုင်း ပေးပြီးပြီ မင်းတို့ပဲ မပေးသေးတာလို့ ဆိုပြန်ပါတယ်…။ ဒါနဲ့ အကိုကြီးလည်း ဟုတ်ကဲ့ အဲဒါဆို ခဏနော် ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကိုခေါ်ပြီး အပြင်ထွက်လာပြီး သူ့ရဲ့ နီးစပ်ရာ သူငယ်ချင်း စားသောက်ဆိုင်တွေကို အမြန်ဆုံးမောင်နှင်ပြီး လိုက်ပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းကြပါတယ်…ဘယ်သူမှ မဆောင်ရသေး ပါဘူးတဲ့… ကဲ နည်းမျိုးစုံနဲ့ အရှက်မရှိစတမ်း တောင်းနေတာနော်…။ ဒါနဲ့ပဲ အခွန်ရုံးပြန်လာ အကိုကြီးက အချက်အလက်နဲ့ ပြောတော့…အဲဒီမိန်းမ မျက်နာက စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ အရှက်မရှိစွာနဲ့ …ဒါက ဒီလို အလွယ်ပြောလိုက်တာပါ…အမှန်က နိုင်ငံခြားသွားတဲ့လူတိုင်း ကြိုတင်ခွန်ဆောင်ရတာတဲ့… ။ မဆောင်ရင် လုံးဝကို ပုံစံ(၁၇) မပေးနိုင်ပါဘူးလို့ ပေါ်တင်ကို ပြောပါတယ်ဗျာ…။ သွားတာက ကျွန်တော်ပါ..ခုက အဖေပိုင်ဆိုင်တာကို အခွန်လည်းဆောင်ပြီးပါပြီ….မဆိုင်တာတွေကို အတင်းထပ်ခါထပ်ခါ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ လှည့်ပတ်တောင်းနေတာပါဗျာ ကဲ။
ပြီးတော့ မျက်နာထားတင်းတင်းနဲ့ မင်းတို့ကို အပေါ်က တောင်းတဲ့အတိုင်း မတောင်းချင်လို့… ဒါကိုမင်းတို့က ဖြစ်ပျက်နေတယ်လည်း ဆိုရော..ကိုကြီးက ကောင်းပြီး ကျွန်တော်တို့ ဆောင်မယ် ..ဆောင်ရင် အရင်က ဆောင်ထားသမျှတွေကို ခင်ဗျာတို့ ဘောက်ချာနဲ့ လက်မှတ်ထိုးပေးပါ.. ခုလက်ရှိ ဆောင်တာရော ထိုးပေးပါလို့ပြောတော့… အို….အဲဒါတော့ ဘယ်ဖြစ်မလည်းတဲ့… ဘောက်ချာ လက်ခံ တောင်းတော့ အတော် ကြောက်ကန်စွာငြင်းပါတယ်..။ ကဲ ပြည်သူများ အရာရာ ခံဘက်က ကြီးပါပဲဗျာ….။ အလုပ်သွားလုပ်တာလည်း မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ကုမ္ပဏီက သင်တန်းတက်ခိုင်းလို့ သွားတက်ရမှာပါဗျာ နိုင်ငံခြားလည်းမရောက်ဖူးတော့ သွားချင်တာပေါ့ဗျာ…မိဘ တွေကဆို နိုင်ငံခြား သွားရလို့ဆိုပြီး ဂုဏ်တွေယူပြီး တပြုံးပြုံးဖြစ်နေကြတာလေ အဲလိုရိုးသားကြတဲ့ နယ်ခံတွေပါဗျာ..။
ကျွန်တော်တို့မှာ ကျားကြောက်လို့ ရှင်ကြီးအားကို ရှင်ကြီးကျားတက်ဆိုးနေတဲ့ အဖြစ်နဲ့ တိုးနေတာပေါ့ဗျာ…ဘယ်တက်နိုင်မလည်း သူတို့ပေးမှ သွားရမယ့်အဖြစ်ကိုဗျာ အဲဒါနဲ့ အကိုလည်း ၆သောင်းဆောင်….ကျွန်တော်လည်း ၅၀၀၀ ထပ်ပေး ..ကဲ စစ်ကိုင်းက ပုံစံ (၁၇) ရလာခဲ့ပါပြီဗျာ…။
ကုမ္ပဏီ ကနိုင်ငံခြား ထပ်လွှတ်ရင်တောင် အကိုနဲ့ ဖေဖေ မေမေတို့ကို သနားလွန်းလို့ သွားရဖို့တွက် စစ်ကိုင်းက ပုံစံ (၁၇) လုပ်ရမှာတောင် ကြောက်နေပါပြီဗျာ… ကယ်ကြပါဦး အရပ်ကတို့ရေ….ဒါက စစ်ကိုင်းက ပုံစံ (၁၇) လုပ်ပုံလုပ်နည်းပါခင်ဗျ…ရန်ကုန်သူ ရန်ကုန်သား တခြားနယ်သား တွေတောင် ဒီလောက် ခက်မယ်မထင်ပါဘူး….ဟူးးးးးး…။
အရှင်ဘုရား တပည့်တော်တို့ကို သနားညှာတာသောအားဖြင့်.. ဤလို ဝန်ထမ်းများအား အမြန်ဆုးံ ဆုံးမအရေးယူနိုင်သောသူ ပေါ်ပေါက်လာပါစေ….။ ဤစာရသော သူများလည်း ကျွန်တော်နှင့် ရိုးသားသော နယ်သူနယ်သား မိဘ မောင်နှမ များအား သနားသောအားဖြင့် လက်လှမ်းမှီရာ လက်ဆင့်ကမ်း ဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့် ကူညီပေးပါရန်….လေးစွားစွာ ဖြင့် အသနားခံ တောင်းပန်အပ်ပါသည်ခင်ဗျား….။
မဲဆောက်-မြ၀တီ တံတားအောက် ကားကုမ္ပဏီနှင့် ထိုင်းလ၀ကများ မတရားငွေကောက်ခံ »